New York Mayor, Canada PM and other leaders are defending Muslims | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeNew York Mayor, Canada PM and other leaders are defending Muslims
New York Mayor, Canada PM and other leaders are defending Muslims
True Activist December 15, 2016 ·
“This is New York. We are always New York.”
Elizabeth Warren joins Muslim Ban Protest at Logan AirportTonight we fight for American values at airports all across this country. I’m at Logan Airport tonight to say: our diversity makes our country strong. We will not allowaMuslim ban in the United States of America.
4:20 AM – 29 Jan 2017
Federal Judge Just IssuedaStay Against Donald Trump’s “Muslim Ban”
10:11 AM – 29 Jan 2017
The lawsuit was brought by the American Civil Liberties Union on behalf of two men detained at John F. Kennedy International Airport in New York City. The men were subsequently released. Cody Wofsy,alawyer with the ACLU, told Mother Joneshe’d worked though the night withalarge group of attorneys on Friday to write the
brief that challenged the executive order.
9:48 AM – 29 Jan 2017
9:50 AM – 29 Jan 2017
10:05 AM – 29 Jan 2017
10:09 AM – 29 Jan 2017
10:07 AM – 29 Jan 2017
← Pope Francis: “You cannot reject refugees and call yourselfaChristian”
Why Myanmar Military, Ma Ba Tha and NLD are Kowtowing China? →
3 thoughts on “New York Mayor, Canada PM and other leaders are defending Muslims”
ထရမ့်၏ ဒုက္ခသည်ပိတ်ပင်သည့် ပေါ်လစီကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချ
ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၇
အမေရိကန်သမ္မတသစ် ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ကန့်သတ်လိုက်တာ၊ မွတ်စလင်နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံကို ဗီဇာပိတ်ပင်လိုက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်ပြည်သူတွေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။
မနေ့က ထရမ့် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်တဲ့ အမိန့်အရ အီရန်၊ အီရတ်၊ ဆီးရီးယား၊ ဆူဒန်၊ လစ်ဗျား၊ ယီမင်နဲ့ ဆိုမာလီယာနိုင်ငံတွေကို ရက်ပေါင်း ၉၀ ဗီဇာပိတ်ထားပြီး၊ ဒုက္ခသည် လက်ခံမယ့်အစအစဉ်ကို ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ နောက်ထပ် အမိန့်တစ်စုံတရာ မထုတ်မီအထိ အမေရိကန်ကို ၀င်ရောက်ခွင့် လုံးဝ ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီနှစ်အတွင်း အမေရိကန်က လက်ခံမယ့် ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကိုလည်း ၅၀၀၀၀ အထိ လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီနေ့မှာ ပူးတွဲ ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည်တွေကို ပိတ်ပင်ထားတာ ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေက အရင်ကထက် ပိုကြီးမားလာပြီး အမေရိကန်ရဲ့ ပြန်လည်နရာချထားရေး အစီအစဉ်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရေးကြီးဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ” လို့ UNHCR နဲ့ IOM တို့က ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေငြာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီအစီအစဉ်ဟာ win-win အခြေအနေဖြစ်ပြီး ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ပေးရုံသာမက သူတို့ရဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ ‘သူတို့နေမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကြွယ်ဝတောင့်တင်းစေမှာ ဖြစ်ကြောင်း’၊ ပဋိပက္ခတွေ၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေကနေ ထွက်ပြေးလာရတဲ့သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရာမှာ ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍမှာ အချိန်အတော်ကြာ ရှိနေခဲ့တဲ့ အမေရိကန်အနေနဲ့ ဒီအခြေအနေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ကြေငြာချက်မှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နယ်ပယ်အသီးသီးက ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ သူတွေကလည်း ထရမ့်ရဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျန် မာ့ခ် အေရော့လ်က ဒီဆောင်ရွက်မှုဟာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပြီး ‘စစ်ပွဲတွေ၊ ဖိနှိပ်မှုတွေက ထွက်ပြေးလာသူတွေကို ကြိုဆိုဖို့မှာ မိမိတို့တာဝန်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်’ လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သမ္မတ ရူဟာနီက အခုခေတ်ဟာ တံတိုင်းကာရမယ့်ခေတ် မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“ဒီနေ့ခေတ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရမယ့် အချိန်ပါ။ နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာ အနေဝေးအောင် လုပ်ရမယ့် အချိန် မဟုတ်ပါဘူး”
ပါကစ္စတန်က ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး နိုဘယ်ဆုရှင် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ မာလာလာ ယူဆွဖ်ဇိုင်က မိမိအနေနဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပြီး ‘သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှု၊ စစ်ပွဲတွေကနေ ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ ကလေးတွေ၊ မိခင်တွေနဲ့ ဖခင်တွေကို တံခါးပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်’ လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုဘယ်ဆုရှင် ၁၁ ဦးအပါအ၀င် ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ပညာရှင်တွေက ထရမ့်ရဲ့ အဲဒီအမိန့်ဟာ ‘ခွဲခြားဆက်ဆံမှု’ ဖြစ်ပြီး ‘ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ပျက်ဆီးစေမယ်’ လို့ ရေးသားထားကာ ပယ်ဖျက်ဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ စာလွှာတစ်ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။
Facebook တည်ထောင်သူ မာ့ခ် ဇူကာဘာ့ဂ်ကတော့ “ကျွန်တော့် အဖိုးအဖွားတွေက ဂျာမနီ၊ သြစကြီးနဲ့ ပိုလန်တို့က လာကြတယ်။ (ကျွန်တော့်ဇနီး) ပရစ်စီလာရဲ့ မိဘတွေကလည်း တရုတ်နဲ့ ဗီယက်နမ်တို့က ဒုက္ခသည်တွေပါ။ အမေရိကန်ဟာ ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူတွေရဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ယူရမှာပါ။ ခင်ဗျားတို့တွေလိုပဲ ကျွန်တော်လည်း ထရမ့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ အမိန့်အတွက် စိုးရိမ်မိပါတယ်” လို့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဇူကာဘာ့ဂ်က မိမိအနေနဲ့ အမေရိကန်ကို လုံခြုံစေချင်ကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ခြိမ်းခြောက်မှုခံရတဲ့ သူတွေကိုလည်း အာရုံစိုက်ဖို့လိုကြောင်း ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ဒုက္ခသည်တွေ၊ အကူအညီလိုတဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ တံခါးတွေကို ဆက်ဖွင့်ပေးထားဖို့ လိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်လောက်ကစပြီး ဒုက္ခသည်တွေကို လက်မခံဘူးဆိုရင် ပရစ်စီလာရဲ့ မိသားစုဟာ ဒီမှာရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး”
“ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူ အရှုပ်အထွေး”ဇန်နဝါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၇
ထရန့်ရဲ့ဒုက္ခသည်ပိတ်ပင်တဲ့မူဝါဒကို ဖေ့စ်ဘုတ်တည်ထောင်သူမက်ဇူကာဘတ် ဆန့်ကျင်ပြောကြား
ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၇ Myanmar Muslim Media
ကျွန်တော့်ရဲ့အဘိုးအဘွားတွေက ဂျာမနီ သြစတြေးလျ ပိုလန်နိုင်ငံတွေကရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Priscilla ရဲ့မိဘတွေကတော့ တရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကနေ ဒုက္ခသည်တွေအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူများရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါအတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ ဂုဏ်ယူသင့်ပါတယ်။
သင်တို့လိုပဲ ကျွန်တော်လည်း သမ္မတထရန့်ရဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံကိုလုံခြုံအေးချမ်းအောင် ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခြိမ်းခြောက်မှုပြုလုပ်နေတဲ့ လူတွေအပေါ်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ထားသင့်ပါတယ်။ ခြိမ်းခြောက်မှုမရှိပဲ အထောက်အထားမရှိထားတဲ့သန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရမှာကို ကြောက်လန့်စွာနဲ့နေထိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန်ကိုလုံခြုံမှုမရှိအောင် တကယ့်ခြိမ်းခြောက်မှုပြုလုပ်နေတဲ့ လူတွေအပေါ်မှာ ဥပဒေပြုအဖွဲ့တွေကအာရုံစိုက်ထားမှုကို တိုးချဲ့ထားရပါမယ်။
ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တံခါးတွေကိုဖွင့်ထားပေးသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒီလိုလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ချို့ကသာ ဒုက္ခသည်တွေကိုကျွန်တော်တို့နှင်ထုတ်မယ်ဆိုရင် Priscilla ရဲ့မိသားစုဟာ ဒီကနေ့အချိန်မှာ ဒီမှာရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံထဲကို မိဘတွေကခေါ်လာခဲ့ကြတဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက် တစ်ခုခုဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ သမ္မတထရန့်ရဲ့ပြောကြားချက်ကို ကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ၇သိန်း၅သောင်းသောငယ်ရွယ်သူတွေဟာ DACA ပရိုဂရမ်အရ အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာ တရားဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတနဲ့ သူ့အဖွဲ့ဟာ ဒီကာကွယ်ပေးမှုတွေကို နေရာတကျထိန်းသိမ်းပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း FWD မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အတူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံထဲကိုအရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေရောက်လာတာဟာ နိုင်ငံကိုအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေတာကိုသမ္မတက ယုံကြည်ထားတာအတွက်လည်း ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဒီအရေးကိစ္စတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် မိသားစုထက်တောင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ချို့က ပြည်တွင်းကအလယ်တန်းကျောင်းမှာ အတန်းတစ်တန်းကိုသင်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီမှာကျွန်တော့်ရဲ့အတော်ဆုံးကျောင်းသားတစ်ချို့က အထောက်အထားတွေမရှိပါဘူး။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေရဲ့နိုင်ငံပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကနေ အကောင်းဆုံးတွေရတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအကျိုးရှိသလို နေထိုင် အလုပ်လုပ်ပြီး ဒီမှာထောက်ပံ့မှုတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ခွန်အားအစွမ်းအစနဲ့အကြင်နာမေတ္တာတရားတွေကိုရှာဖွေပြီး လူတွေအားလုံးကိုအတူတကွပေါင်းစည်းစေပြီး ဒီကမ္ဘာကို အားလုံးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ကမ္ဘာဖြစ်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။